Amanqaku kunye noPhononongo lokuKhanyisa iBonfire nguJack London-Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Khanyisa umlilo nguJack London
Ndithathe ithuba lokudlula kukaFilomena usingasiqithi kunye nokwehla okukhulu kumaqondo obushushu ukuphinda ndifunde Khanyisa umlilo NguJack London.
Njengakwi Umbongo weIthaca Libali elincinci elisongelwe kuhlelo
Ngeli xesha uhlelo endithenge kulo ICordelia Kingdom eza nayo imizekeliso kaRaúl Arias kunye notoliko lukaSusana Carral. Olu hlobo lubandakanya amabali amabini okuKhanyisa iBonfire ebhalwe nguJack London. I-1907 yeyona mntu wonke ayaziyo kwaye isekelwe kuyo imifanekiso esencwadini kunye ne-1902 e efakwe njengesihlomelo kwaye yayiyinguqulelo yokuqala awayibhalela imagazini yoncwadi. Umlingane woLutsha.
Unako yithenge ngoku nge-7
Iinguqulelo zisekwe kwimisebenzi esekwe yiYunivesithi yaseStanford kuyo Ushicilelo lweCanonical lwamaJali apheleleyo kaJack London.
Ngomnyaka we-1907 wayibuyisela kwakhona kwi-Century Magazine kwaye ngo-1910 yahlanganiswa kwiVolost Face Face.
Ndandisele ndiyibonile le mizekeliso kaRaúl Arias kuhlelo lwendlu yopapasho yeRey Lear eqweqwe oluqinileyo kunye nobukhulu obukhulu. Ngumqulu endawuthatha kwithala leencwadi likawonke-wonke, okokuqala ndawufunda. Emva koku ndifumene inguqulelo yoBukumkani beCordelia endigqibe ukuyithenga.
Ngendlela ethile bandikhumbuza ngemifanekiso ka-Agustín Comotto Iilwimi ezingama-20.000 XNUMX zokuhamba ngaphantsi kwamanzi, Eyona ncwadi ithandwa kakhulu nguVerne ukuza kuthi ga ngoku.
Libali elinokufundwa ngaxeshanye, ngeentsuku ezibandayo zasebusika. Libali elimangalisayo nelinamandla elenza ukuba uzifake kwizihlangu ze-protagonist kwaye uqaphele ukubandezeleka kwakhe, ukubandezeleka kwakhe. Kubonisa uburhabaxa bezi ndawo zingenabuntu. Indalo endle kwaye mncinci kangakanani kwaye akakwazi ukuzikhusela umntu.
Inguqulelo ye-1907 ibonakala iphakamile kum ngandlela zonke. Ukuba akukho zingxoxo kwaye ubona kuphela iingcinga zomntu ophambili ezikwenza ukuba uzicwilise ebalini. Ukubonakala kwenja ehamba naye ngexesha lohambo kubonakala kum njengesixhobo esimnandi kunye nesilahlekileyo xa ufunda ingxelo yokuqala.
Yindlela entle yokuqala ukufunda iLondon. Lo msebenzi uhambelana kakhulu Umnxeba wasendle y Ibamba elimhlophe. Omnye umsebenzi wombhali endiwufundileyo kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye ndifuna ukuba nawo Umhambi weeNkwenkwezi.
Kwiminyaka eyi-21, iLondon yaya eAlaska iyokukhangela igolide, yaziva kwaye yayihlala ingqele kwiindonga ze IKlondike. Wahlala kubanda kakhulu emntwini wokuqala, wahamba kula mahlathi kwaye onke loo mava aprintiwe kweli bali.
Ezinye izinto ezinomdla eziqokelelwe kwincwadi.
Ukusuka kuma-45ºC ngezantsi ko-zero kunyanzelekile ukuba uhambe nomntu
Basebenzisa itinder eyenziwe ngebarkch bark. Kuya kufuneka ndiphande ngesi sihloko.
Iinyani ezinomdla ngakumbi
Obona bushushu bomoya buphantsi oburekhodwe eMhlabeni sisikhululo semozulu bube -89,2ºC Yabhalwa eRashiya kwiMpuma ye-Antarctica, kwisiseko seVostok (Umthombo National Geographic). Kodwa kwisifundo se-2018 kwiileta zoPhononongo lweGeophysical (Amaqondo obushushu aphezulu eUltralow eMpuma yeAntarctica Ukusuka kwimephu yeSatellite yeThermal Infrared: Iindawo eziBanda kakhulu emhlabeni) oososayensi abahlalutya idatha yesatellite babona amaqondo obushushu e -90ºC
4 Iinyani ezinomdla ngakumbi